အင်တာမီလန် ဂန္ထ၀င်ကြီး ဇနက်တီ ရင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးသမျှထဲက အကောင်းဆုံး ၃ ဦး က ဘယ်သူတွေလဲ? — Sports Myanmar
အင်တာမီလန် ဂန္ထ၀င်ကြီး ဇနက်တီ ရင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးသမျှထဲက အကောင်းဆုံး ၃ ဦး က ဘယ်သူတွေလဲ?
May 11, 2019 - by Edi Tor
အာဂျင်တီးနား ဂန္ထ၀င် နောက်ခံလူ ဂျာဗီယာ ဇနက်တီ ဟာ ဘောလုံး ကမ္ဘာ ရဲ့ သစ္စာ အရှိဆုံး ကစား သမား တွေထဲ က တစ်ဦး အဖြစ် သတ်မှတ် ခံ ခဲ့ရပြီး အင်တာမီလန် ဂျာစီ ကို ၁၉ နှစ် ကြာ ၀တ်ဆင် သွားခဲ့ ပါတယ် ။ လက်ရှိ အချိန် မှာ လည်း ကလပ် ရဲ့ ဒု ဥက္ကဌ အဖြစ် နဲ့ စီမံခန့်ခွဲ နေသူ ဖြစ် ပါတယ် ။ အင်တာ နဲ့ အတူ ပြည်တွင်း ရော ဥရောပ အောင်မြင်မှု များစွာ ကို လည်း ရယူ စိုက်ထူ ထားနိုင် ခဲ့သူ တစ်ဦး လည်း ဖြစ် ပါတယ်
ဇနက်တီ ဟာ ရှည်လျား လှတဲ့ သူ့ရဲ့ ကစား သမား ဘ၀ တစ်လျောက် အကောင်းဆုံး သော တိုက်စစ် ကစား သမားတွေ နဲ့ ရင်ဆိုင် ခဲ့ ရဖူး ပါတယ် ။ ရိုနယ်ဒို နာဇာရီယို ( ဘရာဇီး ) ၊ လီယွန်နယ် မက်ဆီ ၊ ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို စတဲ့ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး တိုက်စစ်မှုးတွေ နဲ့ ဇနက်တီ ရင်ဆိုင် ခဲ့ရဖူး သလို အီတလီ ရဲ့ ရွှေခေတ် တစ်လျောက် မှာလည်း ကောင်းလွန်းလှတဲ့ တိုက်စစ် သမားများစွာ ကို ရင်ဆိုင် ခဲ့ရဖူး ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ဇနက်တီ ပြောပြ တဲ့ သူ ရင်ဆိုင် ဖူးသမျှ အခက်ခဲ ဆုံး ကစား သမား ၃ ဦး စာရင်း မှာတော့ အပေါ် က GOAT ကစား သမား ၃ ဦး စလုံး ပါဝင် မလာခဲ့ ပါဘူး ။ ဇနက်တီ ကတော့ သူ ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ ခဲ့ရ တဲ့ ခံစားချက် အပေါ် ကို အခြေခံ ပြီး ပြောပြသွားခဲ့တာ ဖြစ်လို့ အခြားသူတွေ ရဲ့ အမြင် နဲ့ တော့ ကွဲပြားနေမှာ သေချာ ပါတယ် ။
ဇနက်တီ စတင် ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ သူ ကတော့ ဇီနဒင် ဇီဒန်း ပဲဖြစ် ပါတယ် ။ ဇနက်တီ ဟာ ဇီဒန်း ယူဗင်တပ်စ် မှာ ကစား ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၆ ကနေ ၂၀၀၁ အတွင်း မှာ ပြင်သစ် ကွင်းလယ်လူ နဲ့ အကြိမ် များစွာ ဆုံတွေ့ ရင်ဆိုင် ခဲ့ဖူး ပါတယ် ။
“ကျွန်တော် သူနဲ့ ရင်ဆိုင် ဖို့ ကံတရား ပါလာခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် သူ့ကို လိုက်ကပ် ကစား ရတာ ဘယ်လောက် အထိ ခက်ခဲ သလဲ ဆိုတာ ကို ကျွန်တော် ကောင်းကောင်း သဘော ပေါက်ခဲ့ ပါတယ်” လို့ အင်တာ ဂန္ထ၀င်ကြီး က ဆိုသွား ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒုတိယ လူ က တော့ ဘရာဇီး နဲ့ အေစီမီလန် ဂန္ထ၀င် ရီကာဒို ကာကာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။ ကာကာ ဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် က ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး ဘောလုံး သမား ဆု နဲ့ ရွှေဘောလုံး ဆုတွေ ကို ဆွတ်ခူး ရရှိ ခဲ့ပြီး အေစီမီလန် နဲ့ အတူ အောင်မြင်မှု များစွာ ရယူ နိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
“ကာကာ ဟာ တကယ့် ချန်ပီယံ တစ်ယောက် ပါ ။ မီလန် ဒါဘီ ပွဲတွေ မှာ သူဟာ ကျွန်တော့ ကို အများကြီး အခက် တွေ့ စေခဲ့ ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး အချိန် မှာ ဆိုရင် ရပ်တန်ု့ ဖို့ အရမ်း ကို ခက်ခဲ ခဲ့ ပါတယ် ။ သူ့ ကို ဘယ်လောက် အထိ သဘောကျ သလဲ ဆိုရင် အင်တာ မှာ လာကစားဖို့ စိတ်ကူး ကြည့်မိ ဖူးတဲ့ အထိ ပါပဲ” လို့ ဇနက်တီ က ပြန်ပြောင်း ပြောပြ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဇနက်တီ ရင်ဆိုင် ကစားခဲ့ ဖူး သမျှ ထဲ က အခက်ခဲ ဆုံးလို့ သတ်မှတ် ထားတဲ့ နောက်ဆုံး တစ်ဦး ကတော့ မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် ဂန္ထ၀င် တောင်ပံ ကစား သမားကြီး ရိုင်ယန်ဂစ် ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။ ဂစ် ဟာ ကစား သမား ဘ၀ တစ်လျောက်လုံး ယူနိုက်တက် မှာ နေထိုင် ခဲ့ပြီး အင်တာမီလန် နဲ့ ချန်ပီယံ လိဂ် မှာ ဆုံခဲ့ဖူး ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဇနက်တီ ကတော့ ဝေးလ် တောင်ပံ ကစားသမားကြီး ကို ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်ခဲ့ ပါဘူး ။
ရိုင်ယန်ဂစ် ဟာလည်း ဇနက်တီ အပေါ် လေးစားမှု အပြည့် ရှိခဲ့ပြီး သူ ရင်ဆိုင် ဖြတ်ကျော် ခဲ့ဖူး သမျှ နောက်ခံလူ တွေ ထဲ မှာ အခက်ခဲ ဆုံး တစ်ဦး အဖြစ် သတ်မှတ် ခဲ့ ကြောင်း ပြောဆို ခဲ့ ဖူး ပါတယ် ။
“၁၉၉၉ မှာ ကျွန်တော် သူနဲ့ စတွေ့ ခဲ့ တာပါ ။ ချန်ပီယံ လိဂ် ကွာတား ဖိုင်နယ် မှာပေါ့ ။ ကျွန်တော် က ဘယ်တောင်ပံ ၊ သူက ညာနောက်ခံလူ ဆိုတော့ ထိပ်တိုက်ကို တွေ့ ကြတာပါပဲ ။ သူ့ရဲ့ လျှင်မြန်မှု ၊ ပါးနပ်မှု ၊ ၊ သန်မာမှု နဲ့ ခံစစ် အရည်အသွေးတွေ က ကျွန်တော့ ကို သဘောကျ စေခဲ့ ပါတယ်” လို့ ဂစ် က အင်တာဗျုး တစ်ခု မှာ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ဖူး ပါတယ် ။